Impiry no atoro ny mandoko mba tsy hanimba ny volo | Bezzia
Tianay ny manova ny endrikay! Izany no mahatonga antsika indraindray tsy mitandrina ny fahavoazana mety omentsika ny volontsika. Ny loko dia iray amin'ireo vahaolana lehibe amin'ireo fanovana ireo, saingy tokony ho ao an-tsaina fa mila vaky sasany ny volontsika. Ka, Impiry ianao no tsy maintsy mandoko izany?.
Mazava ho azy tsy ny volo rehetra no mitovy ary tokony hametraka ny tenantsika amin'ny tànana tsara foana isika mba hialana amin'ny fisalasalana. Fa mandritra izany fotoana izany, avelanay ho anao ny torohevitra tsara indrindra tokony ho adidinao. Aorian'izay vao ho fantatrao raha tena mikarakara ny sarinao sarobidy ianao. Inona no karazana loko ampiasainao?
1 Impiry ianao no tsy maintsy mandoko
2 Raha mandoko ianao amin'ny fandroana loko na loko maharitra maharitra
3 Loko mandoko maharitra
Impiry ianao no tsy maintsy mandoko
Fantatsika rehetra, mihoatra na latsaka, ny fotoana handokoana. Raha manana volo fotsy isika, ho tsikaritray haingana, amin'ny fomba mitovy amin'ny hoe mijery ny fotony. Amin'ireo tranga roa ireo dia fantatsika fa ao anatin'ny telo herinandro mahery dia efa mila famerenana tsara ny loko isika. Fa mazava ho azy, io no fahitantsika azy satria taty aoriana, arakaraka ny karazan-doko nomenay ny tenantsika matetika, dia hafa ihany koa ny valiny.
Araka ny efa nolazainay, antsipiriany iray hafa tokony hodinihina ny fitomboan'ny volo. Tsy mitovy ny fitomboan'ny rehetra, ka ny sasany mila an'io loko io matetika. Raha izany, raha miresaka matetika matetika isika, ny volo maniry bebe kokoa, mila mpamelombelona tsara matetika kokoa izy ireo. Raha hitanao fa aorian'ny fandokoana ny volonao dia maina dia tsara kokoa ny miandry alohan'ny fandokoana azy indray. Ny tsara indrindra dia ny manisy vokatra mandona mandra-pahazoan'ny volo ny fotony.
Un fanadiovana tendrony Tsy maharary koa na angamba, saron-tava vita an-trano miaraka amin'ny akora natoraly mba hitombo haingana ny volontsika. Rehefa manan-danja ny fahasimbana amin'izany dia tsara ho anao miandry iray volana vao manampy loko vaovao. Amin'izany fomba izany no anomezantsika fotoana hiainana sy hiverina amin'ny fotony. Tsara ve ny mandoko isaky ny roa herinandro na angamba isaky ny efatra? Fantaro arakaraka ny loko anaovanao!
Raha mandoko ianao amin'ny fandroana loko na loko maharitra maharitra
Ny fandroana loko na ireo loko semi-maharitra ireo dia safidy mety hanovana ny endrikao. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria hihena haingana kokoa ny vokany. Saingy tokony holazaina ihany koa ho azy ireo fa tsy hanimba betsaka toy ny maharitra. Doko voajanahary kokoa io ary noho izany tsy misy ireo akora simika manamaina volo. Afaka ny ho tonga lafatra fotsiny izy ireo amin'ny fisafidianana loko marevaka kokoa na amin'ny fanampiana feo kely mamirapiratra sy mifanaraka. Ny loko dia ho afaka afaka andro vitsivitsy, miankina amin'ny impiry hanasana ny volonao. Satria miresaka momba ny vokatra malemy kokoa isika dia tsy mila miandry ela ianao vao hanova ny loko. Mazava ho azy, miezaha handao andro vitsivitsy hahafahana manafoana ny vokatra. Afaka roa herinandro latsaka dia afaka mampihatra iray vaovao ianao.
Loko mandoko maharitra
Rehefa miresaka momba a loko mandoko maharitra, avy eo miresaka momba ny vokatra simika isika. Izany no mahatonga ny volo hijaly, na dia mahasalama anao toy inona aza. Marina fa ireo karazana loko ireo dia manarona volo fotsy ary mahatonga antsika hanana fiovan'ny endrika mahery vaika kokoa. Saingy aorian'izany rehetra izany dia tsy afaka mihoa-pefy ihany koa isika. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria afaka manafay be ny volonao ianao. Noho izany antony izany dia tsara ny miandry, telo herinandro farafahakeliny. Na dia efa manana volo tena simba aza ianao dia tsara kokoa ny miandry herinandro hafa.
Aza adino fa ny fikarakarana volo lehibe dia ilaina foana. Ho fanasana azy dia tsara kokoa foana ny misafidy ireo vokatra natao hikarakarana sy mazava ho azy, ho an'ny volo nolokoana. Asio «conditioner» tsara ary indray mandeha na indroa isan-kerinandro, sarontava ho anao karazana volo. Atsipazo ireo loharano mafana toy ny fanamainana na vy, safidio ny manapaka azy ary manome fiainana vaovao azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fandram-bolo » Impiry no atoro ny mandoko
Ny lakolosy dia asina amin'ny lohataona
Ahoana ny fomba hialana amin'ny tsy fivadihana